akara & ọkọlọtọ
Dị iche na anyị kpochapụwo azu paaki SFH, anyị na-akpali ọkọlọtọ ugwu nke Backpack ọkọlọtọ & banye n'ime zippered ngalaba na-ahapụ azụ panel flat.
Emebere mkpanaka ọkọlọtọ dị ka ngwakọta na-agbanwe agbanwe nke nhọrọ ọkọlọtọ ise n'otu sistemu, otu akpa azu paaki na otu ọkọlọtọ nwere ike dabara n'ụdị 5 ama ama (nku, anya mmiri na rectangle, arch, paddle)
Nnukwu elu dị n'azụ, na-enye gị ohere mado akwụkwọ mmado ahụ, ya mere ma ọkọlọtọ na nnukwu akwụkwọ mmado ga-adọrọ mmasị, nyere gị aka ịchọpụta azụmahịa ndị ọzọ nwere ike ime.
Site na eserese omenala maka ọkọlọtọ na akwụkwọ mmado nke ị nwere ike ịgbanwe ngwa ngwa site n'otu ihe omume gaa na nke ọzọ, ọkọlọtọ Backpack & sign bụ otu n'ime ngwaọrụ kachasị ọnụ ahịa maka ije ije n'ime ụlọ ma ọ bụ n'èzí.
(1) Innovation ọkọlọtọ arịọnụ imewe. WZRODS zuru ụwa ọnụ hibere ya
(2) Otu akpa azu paaki na osisi setịpụ uwe maka ụdị ọkọlọtọ 5, ọ dị mfe ịgbanwe ma jikwaa ngwaahịa gị iji zute usoro ngwa ngwa nke ndị ahịa, belata ngwa ahịa na ohere ngwaahịa gị.
(4) Ime akwa zipper na-enye ohere maka ịtọhapụ aka gị n'efu. Ogologo akpa mere karịsịa maka ịchekwa okporo osisi
(6) akpa akụkụ akpa / nko maka karama mmiri
Koodu ihe Ngwaahịa Nha mbipụta Ibu nha mbukota
BBXDNOA F/S/U Ọkọlọtọ 122*51CM 1.2KG 54*30.5*5.5CM
Akwụkwọ mmado 51*28CM
Nke gara aga: 2 n'ime 1 ime ụlọ
Osote: Ọkọlọtọ Udiri X nke Deluxe
ọkọlọtọ ọkọlọtọ azu paaki
Ogwe ọkọlọtọ azu paaki
ọkọlọtọ ije ije azu paaki
Mgbasa ozi mkpanaka akpa azụ mmadụ
Bọdụ azụ azụ